कैलाली घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ – Rajdhani Daily
कैलाली घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ स्थित देउकलियाकी छात्रा राधा चौधरीमाथि निर्घात कुटपिटमा संलग्न कथित झाँक्री रामबहादुर चौधरीलाई र आफूलाई पार्वती दाबी गर्ने किस्मती चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अभियुक्त कारबाहीको दायरामा आउने सम्भावना बढेको छ । राधा चौधरी कुटिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै अभियुक्त कारबाहीको दायरामा आएका थिए । भिडियो सार्वजनिकसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक जनदबाब सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष निर्देशन दिएका थिए । जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्था आएबाटै थाहा हुन्छ, हाम्रा स्थानीय, प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधि कति जिम्मेवार छन् ।
कैलाली घटनालाई केवल एउटा युवतीले पाएको यातना मात्रै भनेर बुझ्नुहुँदैन । यो सामाजिक संकीर्णताको कुरूप परिवेश हो भने स्थानीय प्रशासनको नालायकी पनि त्यही घटनाले स्पष्ट पार्छ । स्थानीय पत्रकार स्वयं कथित भोलेबाबाकोमा ‘मेरो भाग्य कस्तो छ ?’ भन्दै ढोग्न जानु, एउटी निरीह महिलामाथि आक्रमण हुँदा स्थानीय रमिते बनेर बस्नुजस्ता घटनाले हाम्रो समाज कुन युगमा छ ? एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ । राधामाथि आक्रमण भएकै दिन अर्की एक शिक्षिकासमेत बोक्सीको आरोपमा कुटिएकी थिइन् । भित्री गाउँमा अन्य कति महिला दैनिक बोक्सीको आरोपमा कुटिन्छन् ? सही तथ्यांक खोतल्ने हो भने डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक हुन सक्छ । घटना सार्वजनिक भएपछि केही युवाको पहलमा घटनाबारे प्रहरी प्रशासनलाई समेत जानकारी गराइएको थियो । तर, प्रहरीले उल्टै पीडितलाई दबाब दिएर पीडकसँग मिलापत्र गराएर पठाएको छ । लाग्छ, नेपालका प्रहरीलगायत कतिपय सरकारी कर्मचारी अझै लोकतान्त्रिक भइसकेका छैनन् । सामान्य आश्वासनमा लोभिन्छन् र अभियुक्तलाई संरक्षण दिन्छन् । कैलाली मात्रै होइन, अन्य जिल्लामा पनि प्रहरी प्रशासनकै संरक्षणमा धेरै अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् । ललितपुर बलात्कार घटनामा जिल्ला न्यायाधीशले बलात्कारीलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका थिए भने दरबारमार्ग बलात्कार घटनामा प्रहरीले पीडितको उजुरी लिन आनाकानी गरेर टार्ने प्रयास गरेको थियो ।
प्रहरी प्रशासनले बदमासी गरे भने तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व जनप्रतिनिधिको हो । तर, घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले उल्टै प्रहरीसँग मिलेर पीडकलाई पीडितसँग मिलापत्र गर्न दबाब दिए र आफ्नै रोहबरमा छाड्ने आदेश दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू वाम गठबन्धनको मात्रै नभएर नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिरहँदा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । अभियुक्तलाई छोड्नुपर्छ भनेर दबाब दिने नगरपालिकाका प्रमुखमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले सुक्खड प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रमुख दिनेश विष्ट निलम्बनमा परेका छन् भने घटनामा संलग्न अभियुक्त केही पक्राउ परिसकेका छन् र केहीलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ । हेर्न बाँकी छ, राधा निको भएर अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भएपछि अभियुक्तलाई पनि छोडिन्छ वा कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।